I-KDE Gear 21.04, usetyenziso lutshintsha igama kwaye lazise imisebenzi emitsha | Ubunlog
I-KDE Gear 21.04, "Izicelo" zitshintsha igama kwaye lazise imisebenzi emitsha
Namhlanje lusuku olubalulekileyo kubasebenzisi abaninzi beLinux. Kwimizuzu, ndingabanjwa ndibhala eli nqaku, iCanonical iya kukhupha Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo kunye nazo zonke iincasa zayo ezisemthethweni, kwaye ukuba benditshilo ukuba lusuku olubalulekileyo kubasebenzisi abaninzi beLinux kungenxa yokuba kwiiveki ezizayo baya kukhupha Olunye ulwabiwo olusekwe kwezi. Kodwa mhlawumbi namhlanje kubaluleke ngakumbi kubasebenzisi beKubuntu, kuba iiyure ezimbalwa ezidlulileyo zakhutshwa I-KDE yezixhobo 21.04.
Kumfundi wokuqala weGear, kuya kufuneka uyazi ukuba iprojekthi ye-K inayo yathiywa ngokutsha "Izicelo" zayo ngegama elifanelekileyo kuba ibandakanya ngaphezulu kwezicelo, njenge "giya" yi "giya", njenge logo ye KDE. Ukuba yinguqulelo yokuqala kuthotho olutsha, ukuseta isicelo sika-Epreli 2021 iza nezinto ezintsha, njengale unayo ngezantsi.
1 Amagqabantshintshi eKDE Gear 21.04
2 Ikhowudi yakho ngoku iyafumaneka
Amagqabantshintshi eKDE Gear 21.04
Ukudibana ngoku kuxhasa i-Autocrypt, ezisa ukhuseleko kunye nokulula. Ikwabonelela ngolawulo olukhulu malunga noko sikukhuphelayo xa ujonga imiyalezo. Uyilo luphuculwe kwaye awunakuba nangxaki ekusebenziseni isoftware nakweyiphi na inkonzo ye-POP okanye ye-IMAP.
Itinerary ibandakanya imeko yexesha lokwenyusa izinyusi kunye nezinyusi kwisikhululo sikaloliwe ukujonga imephu, umzekelo, kwaye unokuvavanya i-OpenStreetMap iiyure zokuvula. Ikwabandakanya inqaku lokwahlula phakathi kweebhayisikile ezisekwe kwidokodo kunye neebhayisekile zokurenta.
I-Dolphin ngoku ikuvumela ukuba uvule iifayile ezininzi ngexesha elinye. Kwintsimi yokusebenziseka, ngoku ibonisa indlela ii-icon ezihlengahlengiswe ngayo xa zahlula indawo yokujonga okanye ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona kwefestile. Ikwasivumela ukuba silungelelanise amangeniso kwimenyu yokuma. Kwelinye icala, iphucule inkxaso yeGit, phakathi kwezinye izinto ezinqabileyo.
U-Elisa ngoku uxhasa ifomathi ye-AAC kwaye unokusebenzisa uluhlu kwifomathi ye-m3u8. Eyona nto intle kukuba ngoku isebenzisa imemori encinci.
IKdenlive ngoku ixhasa i-AV1 kwaye kulula ukuyisebenzisa.
UKate ngoku uza nenkxaso yokuskrola isikrini; ingabonisa zonke izinto ze-TODO kwiprojekthi; kwaye ikuvumela ukuba wenze imisebenzi esisiseko ye-git ngaphakathi kwesicelo sakho, njengokujonga okungafaniyo, ukubeka esiteji, ukwenza, kunye nokubamba.
Kwi-Okular, xa uzama ukuvula uxwebhu olutsha olusele luvulekile, ngoku litshintshela kuxwebhu osele luvulekile endaweni yokubonisa iikopi ezimbini; Inkxaso ka-Okular yeefayile zeFictionBook inezinto ezintsha; kwaye ngoku amaxwebhu anokutyikitywa ngokwamanani.
UGwenview ubonakalisa ixesha langoku kunye neliseleyo xa udlala ividiyo, kwaye ikuvumela ukuba uhlengahlengise umgangatho / umgangatho woxinzelelo lwemifanekiso kwiifom zeJPEG XL, WebP, AVIF, HEIF kunye neHEIC.
Umboniso ngoku ukuvumela ukuba utshintshe ifomathi yefayile emiselweyo xa usebenzisa ulwimi ngaphandle kwesiNgesi.
Gcwalisa uluhlu ku Inqaku lokukhupha.
Ikhowudi yakho ngoku iyafumaneka
I-KDE yezixhobo 21.04 Ikhutshiwe le mini, ke abaphuhlisi sele beqalisile ukusebenza ngayo. Ukuba ayikafiki, izakuza kungekudala kwi-KDE neon, kwaye kamva iya kuqala ukwenza oko kusasazo lwemodeli yophuhliso yiRollin Release. I-Kubuntu 21.04, emalunga nomhlaba, iya kufika ukuba sidibanisa i-KDE Backports PPA.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » KDE » I-KDE Gear 21.04, "Izicelo" zitshintsha igama kwaye lazise imisebenzi emitsha
Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo ifika neendaba, kodwa ezimbalwa ukungabikho
IXubuntu 21.04 iza neXFCE 4.16 kunye nenketho yokufaka "encinci"